Somalia: Wasiir hore oo ku geeriyooday Muqdishu
MUQDISHU, Somalia- Wasiirkii hore ee wasaaradda Dekedaha dowladda Federaalka Somalia, Nuur Faarax ayaa saaka ku geeriyooday magaalada Muqdishu caasumadda Somalia, sida ay GO u xaqiijiyeen qaar kamid ah mas’uuliyiinta dowladda.
Nuur Faarax ayaa kamid ahaa golahii wasiirrada Ra’isal wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake.
Mas’uulkan dhintay ayaa muddooyinkii dambe ku jiray xaalad caafimaad darro iyadoo la dhigay mid kamid ah xarumaha caafimaadka magaalada Muqdishu.
Dhawaan waxaa booqday qaar kamid ah mas’uuliyiinta xukuumadda cusub kuwaasoo ALLE uga baryay inuu siiyo caafimaad taam ah.
Marxuum nuur ayaa muddo soo hayay xilkan, kaasoo usoo magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake.
Qaar kamid ah saraakiisha dowladda ayaa tacsi u diray dhammaan ehelkiisa iyo qoyska uu ka dhashay, iyagoo EEBBE uga baryay inuu u naxariistiisa janno ugu deeqo.
Waxaa lagu wadaa in maanta aas-qaran loogu sameeyo magaalada Muqdishu iyagoo la filayo inay duugtaas kasoo qayb galaan saraakiil katirsan golayaasha dowladda.
Wasiirrada Cusub Somalia oo ku kulmaya Muqdishu
Soomaliya 30.03.2017. 12:45
MUQDISHU, Somalia- Waxaa la qorshaynayaa in magaalada Muqdishu caasumadda Somalia, kulankii ugu horeeyay ku yeeshaan wasiirrada cusub ee shalay la ansixiyay, iyagoo kawada hadlaya arrimo kala duwan oo ay ku jiraan amniga iyo abaaraha.
Shirkan ayaa ah mid inta ...
​Mas'uuliyiin booqatay xarunta lagu hayo dhalinyarada Shabaab kasoo goosta
Soomaliya 29.05.2016. 11:38
Madaxweynaha Somalia iyo Jawaari oo soo dhaweeyay ansixinta xukuumadda
Soomaliya 29.03.2017. 14:02
Soomaliya 29.03.2017. 13:51
Somalia: Wasiir Ceymooy oo beeniyay inuu kamid ahaa dadkii lagu qarxiyay Muqdishu
Soomaliya 13.03.2017. 18:48